छैन धेरै मान्छे, कि विचार किन वर्षा छ वा हिउँ। आउँछ र जान्छ, तर मौसम खराब, यो मूड भताभुंग पार्छ छ। र अझै यसलाई कुनै हानि किनभने, आमाबाबु बन्ने, मानिसहरू अक्सर यस्तो जस्तो देखिने सरल प्रश्न सुन्न, सबै अन्वेषण हुनेछ एक रोचक प्राकृतिक घटना हो: "किन वर्षा गर्छ वा चमक?"। Crumbs आवश्यक सबै विवरण, तर छ वा सात वर्ष पुरानो बच्चा एकदम गम्भीर व्याख्या बुझ्न सक्षम छ व्याख्या। त्यसैले यो बच्चा छाता र खराब मौसम को एक रिमाइन्डर मा प्रश्न गर्न सक्छन् कि एक प्रश्नको जवाफ थाहा राम्रो छ।
ठोस, तरल र महामण्डल: आफ्नो स्कूल रसायन पाठ्यक्रम धेरै मानिसहरू पानी एकत्रीकरण धेरै राज्य अमेरिका मा अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह छ। यसबाहेक, महामण्डल राज्य एउटा तरल देखि, यो लगभग स्थिर र थप गहन उच्च यसको तापमान जान्छ। तपाईं तालिका मा पानी को एक पानीको सानो खाडल छोड्नु भयो भने, यो dries एक समय पछि - वाफ बन्नु। कुनै पनि सतहहरु देखि - त्यस्तै, यो बिरुवाहरु को पात, माटो बाट, नदी, ताल देखि evaporates। त्यो फिर्ता आए भूमिगत नदी अघि पारित वर्षा खुवाउन भनेर र पोखरी। त्यसैले यो पानी, evaporates मा उत्तेजित गर्दछ पानी वाष्प।
जहाँ हावा तापमान जमीन, संक्षेपण नजिकै अवलोकन देखि एकदम फरक छ troposphere, अर्थात् पानी एक थोपा पानी र उच्च उम्लिरहेको संग पैन को ढक्कन मा दुवै: तर प्रकृति मा सबै सन्तुलित छ। जब तिनीहरू पनि भारी छ बन्न तिनीहरूले धेरै, जम्मा गठन हावाहुरीमा बादल, र त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण द्वारा जमीन घटेको गर्न गिरावट - यो वर्षा आउँछ! पानी सङ्कलन धाराहरु मा, नदी, अन्ततः यसको अवशेष को समुद्रहरू एक पुग्न सक्छ। यो सबै फेरि माथि सुरु हुन्छ। निस्सन्देह, प्रक्रिया केहि सरल वर्णन, तर कुनै पनि गम्भीर चूक बिना।
यो घटना प्रकृति पानी एउटा सर्कल वा भंवर रूपमा चिनिन्छ। तथापि, उत्तरार्द्ध शब्द भँवर सामान्यतः वर्षा कुनै सम्बन्ध छ, जो अर्को घटना उल्लेख छ रूपमा, केहि गलत छ।
यो सबै कहानी किन वर्षा बताउँछन्। बरफकोक्रिष्टल - कहिलेकाहीं, बरु हिउँ परिरहेको छ, यो पानी थोपाहरूद्वारा स्थिर र snowflakes बन्न छ। Grad - अझ रोचक घटना, यो गर्दा केही स्थिर हुन सक्छ, तर snowflakes बन्न र hailstones परिणत गर्न नहीं, condensate, अर्थात् पानी थोपाहरूद्वारा धेरै चिसो हावा संग ठोक्किनु गर्दा हुन्छ। ठूलो बादल बलियो updraft, वर्षा एकदम लामो समय गिर गर्न अनुमति गर्दैन छ भने असिना उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई न्यानो हावा संग चिसो बादल collides छ जब आँधी, गिरने असिना सुरु हुन्छ। यो घटना तथापि, संग भ्रमित छैन गर्न सकिन्छ चिसो वर्षा, हिमपात छर्रहरुमा वा असिना - तिनीहरूले एकदम फरक।
यस वर्षा पछि, मौसम न्यानो छ, विशेष गरी यदि पनि तातो, तपाईं एक इन्द्रेणी देख्न सक्छौं। यस वर्षा च्याउ, त्यो छ, सूर्य बादल पछि लुकेको छ, यो सीधा वर्षा मा देख्न सकिन्छ। यो evaporating वा झर्ने पानी सूर्य चमक छ जब सानो थोपाहरूद्वारा हुन्छ। यो कहिलेकाहीं प्रश्न त एउटा सुन्दर प्राकृतिक घटना, छोराछोरी संग धेरै लोकप्रिय छ: "? किन वर्षा गर्छ" - एक पनि यसो भन्न सक्छौं: "मान्छे इन्द्रेणी हेर्न को लागि।"
रातो मेपल। सजावटी रातो मेपल
जाडो लागि तयार जनावर (तस्वीर)
साईट च्याउ: कति चाँडो chanterelles बढ्छ?
Bler Braun - थिएटर र सिनेमा को एक लोकप्रिय अभिनेत्री
वोल्गा: नदी शक्ति र नदी वोल्गा मोड। विद्युत आपूर्ति वोल्गा
Pompidu Zhorzh: संक्षिप्त जीवनी, फोटो, उद्धरण
कसरी खुला क्षेत्र दायाँ मा बेलारुस मा एक खरबुजा बढ्न? बेलारुस मा Melons कसरी बढ्न